चत्रपथको तीनकुने–एयरपोर्ट–तीलगंगा खण्ड १२ लेनको बनाइने
काठमाडौं । सरकारले चत्रपथको तीनकुने–एयरपोर्ट–तीलगंगा खण्डलाई नमुना शहरी सडकका रुपमा विकास गर्ने भएको छ । यो सडकमा नेपाली सीप, प्रविधि र लगानीमा बनाइने सडक विभागले जनाएको हो । हाल यो सडक २ लेन अर्थात ७ मिटर छ । विस्तार गर्दा १२ लेन अर्थात ६२ मिटर हुनेछ । मुख्य र सहायक लेन ३.५ मिटरका हुनेछन् भने साइड लेनहरु केही साँघुरा हुनेछन् । सड
हदबन्दी छुटको हदै दुरुपयोग
हदबन्दी छुटका नाममा लिएको जग्गा दुरुपयोग भएको छ। चियाबगान, हाउजिङ कम्पनी, हाइड्रोपावरलगायतले हदबन्दी छुटका नाममा ठूलो परिमाणमा जग्गा ओगट्दै आएका छन्। ती जग्गा कुन अवस्था छन् भन्ने विवरण सरकारसँग छैन। हदबन्दी छुट भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले दिएको हो। मन्त्रालयका उपसचिव लीलानाथ दाहालले हदबन्दी छुट जग्गाको अद्यावधिक विवरण तयार
घोराहीस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको ८२ बिघा जग्गा १० वर्षदेखि कब्जामा छ । मुक्त कमैया आन्दोलनका बेला क्याम्पसको जग्गा कब्जा भएको थियो । त्रिवि आंगिक क्याम्पसका नाममा करिब ९० बिघा जग्गा थियो । क्याम्पसले ८ बिघामा संरचना तयार गरेर पठनपाठन सञ्चालन गरेको छ । ८२ बिघा खेतीयोग्य जमिन, सुकुम्बासी, भूमिहीनका नाममा ‘कब्जा’ मा रहेको क्या
ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा वैधानिक रूपमै आर्थिक चलखेलको जोखिम बढ्ने गरी सरकारले ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’ खडा गरेको छ । यसबाट विकासे मन्त्रालयका प्रभावशाली मन्त्रीहरूले आफ्नो स्वार्थअनुरूप काम गर्ने ठेकेदारलाई बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिएर ‘कमिसन’ खाने वैधानिक बाटो खुल्ने आशंका बढेको छ । पञ्चायतकालदे
बाढीले क्षति पुगेको संरचना निर्माण गर्न २ अर्ब ११ करोड लाग्ने
काठमाडौैं । गत असार २७ देखि २९ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाको कारण तराई क्षेत्रमा आएको बाढीले पुर्याएको क्षतिको दीर्घकालीन संरचना निर्माणमा दुई अर्बभन्दा बढी रकम लाग्ने देखिएको छ। उक्त बाढीका कारण जलस्रोत तथा सिँचाइको क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको थियो। बाढीले कटान गरेको तथा बिगारेको संरचनाको दीर्घकालीन निर्माणमा २ अर्ब ११ करोड लाग्ने तथ्याङ्कले देखाएक
सम्झौता अनुसार काम भएको भए पूर्वी सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाअन्तर्गत पर्ने सुवाघाट–टुँडीखेल जोड्ने सडक गत आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न भएर गाडी सञ्चालन भइसक्थे। दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २५ किलोमिटर यो सडक निर्माणको जिम्मा लुम्बिनीरएमकेरलोहनी जेभी काठमाडौंले लिएको थियो। गत आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण सम्प
भेरी–बबई डाइभर्सनमा विभागको अवरोध
राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाले सुरुङ परीक्षण गरी माघसम्म ३६ हजार हेक्टर खेतमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन राखेको प्रस्ताव अघि बढाउन सिँचाइ विभागले आलटाल गर्दा काममा अवरोध सिर्जना भएको छ। भेरी–बबई समयभन्दा छिटो सुरुङ निर्माण गरेका कारण प्रशंसा बटुलेको आयोजना हो। २०७२ जेठ २१ गते सुरुङ खन्न सुरु गरेको निर्माण कम्पनीको म्याद २०७६
चलचित्र विकास कम्पनीको २० रोपनी जग्गा गायब,कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट फायल हरायो
काठमाडौं । ‘ बालाजुको जग्गा खोई ? नेपाली चलचित्रको विकासका लागि दिएको जग्गा व्यक्तिले ‘क्याप्चर’ गरेर मोजमस्ती गर्न मिल्छ ? अब पानीमुनि गए पनि छोडिन्न ।’ चलचित्र विकास बोर्डको १९ औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाद्वारा व्यक्त धारणा हो यो । काठमाडौंको बालाजुमा रहेको आफ्नो
काठमाडौं । इटालियन ठेकेदार कम्पनी सीएमसी काम छाडेर हिँडेपछि मेलम्चीको पानी कहिले काठमाडौं आउँछ भन्ने अनिश्चित छ । तर, मलेम्चीको पानी वितरण गर्ने संरचना समेत अझै तयार भएको छैन । चक्रपथभित्रै कलंकी र महाराजगञ्ज क्षेत्रमा अझै पनि मेलम्चीको पानीलाई लक्षित गरेर नयाँ वितरण लाइन बिछ्याइएको छैन । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)अन्तरगत
उपत्यकामा एकीकृत यातायातको तयारी : रेल, मेट्रो, ट्राम, बसको एउटै सञ्जाल निर्माणको योजना
सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक एकीकृत यातायात सञ्चालनको तयारी गरेको छ । सरकारले शक्तिशाली ‘सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण’ गठन गरी एकीकृत प्रणालीमा बस, ट्याक्सी, मेट्रो, लाइट रेल, मोनो रेल, केबलकार, स्काई रेल, राइड सेयरिङलगायतका सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो । यसका लागि ‘काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण विध